မိုးခေါင်ရေရှားဒေသမှ အော်သံများ: ကြေအက်သွားသော အိပ်မက်အပိုင်းအစများ
အမှောင်တွေ ၊ အမှောင်တွေ...။အမှောင်ထဲမှာ သူ့စိတ် နစ်မျောစီးဆင်းသွားတယ်..။ပိန်းပိတ်အောင်မဲမှောင်နေတဲ့ညဟာ ညအတိုင်းသာရွေ့လျားလည်ပတ်။အိပ်မက်ရော်ရွက်ဝါတို့ကညမြေပြင်ထက်လွန့်လူးဝေ့၀ဲ။ အမှောင်တွေ၊အမှောင်တွေ..။အမှောင်တွေထဲမှာ တစ်စွန်းတစ်စ.မမ..။ဟုတ်တယ်၊၊မမမျက်နှာပဲ..။ အမှောင်မှာပဲကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းတဖြည်းဖြည်းလင်းလာ။ဟာ..ရောင်စဉ်တွေ. ..ဖြာထွက် ၊ သူ့နှုလုံးသား အလယ်ချက်ဆီမှ..။မမဆံနွယ်နက်ပျော့အိအိတွေက လေထဲမှာ ၀ဲပျံလူးလွန့်လို့ ၊၊ တစ်စတစ် သူ့နှလုံးသားကို ချည်ရစ်ယူဆောင်သွားခဲ့..။ကြယ်တွေကိုခူးဆွတ်လို့မမပန်ဖို့လှမ်း အပေး၊မမက..အဝေးကို....ဟိုး............အဝေးကြီးကိုပြေးထွက်သွားတယ် ၊၊ သူ့ရင်ခွင်မှာဟာခနဲ.၊၀ုန်းဒိုင်းတွေကြဲလို့၊၊
နှုလုံးသွေးတွေလည်း ခြောက်ကပ်ခန်းလာသလို။အို....နောက်တော့လမင်းလိုရောင်စဉ်တန်းတွေ နဲ့ မမပြန်ရောက်လာတယ်။နှုတ်ခမ်းလေးကွေးညွှတ် မမ သူ့ကိုပြုံးပြတယ်.။ကမ္ဘာမြေတစ်ခု
လုံးသူတို့နှစ်ယောက်တည်း။အမှောင်ထဲမှာ .. .မမကလင်းလက်နေတယ်။တိမ်တွေကိုစီးပြီး ခရီးတွေထွက်ကြ ၊ မမလက်ကို သူကဖမ်းဆုပ် ၊“ချစ်တယ်”လို့ခပ်တိုးတိုးသူပြောတယ်..။ မမကရှက်ဝါးဝါးလေးနဲ့ခေါင်းလေးအငုံ့၊သူကမမပုခုံးကိုဖမ်းဆုပ်လိုက်တယ်။မမကိုယ်ကရနံ့တွေက မွှေးအီထုံသင်းနေတယ်။ခပ်တင်းတင်း
သူအဖက်မှာ မမမီးခိုးရောင်တွေအဖြစ် အငွေ့ပျံပြောင်းသွား...။ဟာ..မမ ၊ မမ ၊၊သူအလန့်တကြား လည်ချောင်းက အသံကထွက်မလာဘူး..ဆို့နင့်ကြေကွဲ........သူ့မှာမျက်ရည်စီးကြောင်းတွေနဲ့...။
ဖျတ်ခနဲ အိပ်မက်က လန့်အနိုးမှာ သူကယောင်ကတမ်းဖြစ်မိတယ်..။သူ့မျက်လုံးအိမ်ထဲမှာ အမှောင်တွေ။ပြီးတော့.....သူ့ပါးပြင်သူပြန်စမ်းမိတော့ မျက်ရည်စီးကြောင်းတွေနဲ့..။ ဟူး....အိပ်မက်ထဲမှာတောင်ဖမ်းစားနိူင်လွန်းပါလားမမရယ်..လို့သူရေရွတ်ရင်း...ဘာမဟုတ်ဘဲ
အများကြီးပါ..။ ရှာမတွေ့ရင်လည်း ငါရှာပေးမယ်..။အဲဒီ့ တစ်ခုလပ်မကြီးနဲ့တော့
တစ်လမ်းတည်းနေ သူငယ်ချင်းမင်းအောင်မျက်နှာက ရှုံတွနေတယ်။မင်းအောင်စကားတွေက ခပ်ရင့်ရင့် .။သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ မင်းအောင်မျက်နှာကို လက်သီးချက်ပေါင်းများစွာ ထိုးပစ်လိုက်မိတယ်။
ဒီလိုစကားတွေ ကြားရတာ သူ့နှလုံးသားကိုအပ်အစင်းပေါင်းများစွာနဲ့ထိုးနေသလို၊၊
မမကို မြူတစ်မှုန်တောင် အပွန်းအပဲ့မခံလို။မမနဲ့ပတ်သတ်ပြီး စကားရင့်ရင့်တွေမကြားလို။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်...၊ မမဆိုတာ သူ့အတွက်ထာဝရလင်းတဲ့ လမင်း ၊ မွှေးမြထုံသင်းတဲ့ ရင်ခုန်ခြင်း ၊ပြောင်းလဲမရတဲ့ ချစ်ခြင်းပဲဖြစ်၊အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်း လဲ့ရွှန်းတောက်ပလို့ပေါ့ .။၊၊စိတ်ထဲ ၊ နှလုံးထဲမှာ မမဆိုတာ တခမ်းတနား စီးမျော ၊နှလုံးခုန်ရပ်လု ရင်ခုန်သံတွေ မြန်ဆန်လာ ၊ချစ်တယ် .။ဟုတ်တယ်..။ မမကို ချစ်တယ်။ ဘယ်သူ ဘာပြောပြော...သူက မမကိုချစ်တယ်လေ..။
မမရှိတဲ့အခွေဆိုင်လေးဆီ လျှောက်လာတဲ့ သူ့ခြေထောက်တွေမှာ ရင်ခုန်ခြင်းပန်းတွေပွင့်လို့ ။ တစ်လှမ်း.။တစ်လှမ်း..၊။လှမ်းလာလိုက်တာ လမ်းတွေလည်း တခြားလမ်းတွေထက်ပိုစိမ်းလန်းနေတယ်..။
စိတ်ထဲမှာ မမအကြောင်းတွေတွေး ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ၊အိပ်မက်တွေ အထပ်ထပ်နဲ့ မမ မျက်နှာလေးကြည်လင်ဝိုင်းစက်တဲ့ မျက်ဝန်း ၊ကော့မတ်ရွှန်းစိုနေတဲ့မျက်တောင်
နက်နက်တွေ၊ ကွေးညွှတ်အိထွေးတဲ့ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံ၊အဲဒါတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လို့အချိုးကျကျလှပနေတဲ့ဖြူနုသွယ်
တွေးရင်း...တွေးရင်း ရင်ခုန်လာ ၊ ရင်ခုန်ရင်း..ရင်ခုန်ရင်းနဲ့ တွေးလာတာ မမရဲ့အခွေဆိုင်လေးနားရောက်မှ အတွေးစတွေ ပြယ်လွင့်သွားတယ်..။
မမက သူ့ကိုမြင်တော့ ပြုံးပြတယ်.။အို...မပြုံးပါနဲ့လား...မမရယ်..။အဲဒီ့အပြုံးပေါ့ ၊သူ့နှလုံးသားကို ကျုံးသွင်းယူဆောင်သွားတာ။ဒါပေမယ့်.ပြုံးပါမမရယ်.။ပြုံးပါ..။မမပြုံးတာသိပ်လှတယ်လေ။မှန်ဘောင်ခတ်ပြီးတောင် တခုတ်တရသိမ်းထားချင်စရာကောင်းတဲ့အပြုံး.၊၊အဲဒီလိုအပြုံးမျိုး မမတစ်ယောက်တည်းသာ ပြုံးတတ်တယ်လေ ။
“ မောင်..၊ ဘာကြည့်နေတာလဲ။ဟွန်း...လူကိုမမြင်ဖူးတာကျနေတာနော်..။ ”
မျက်စောင်း။ပန်းနုရောင်မျက်စောင်း ။ဘာပြောရမှန်း မသ်ိအောင်သူ့ကိုငြိမ်ကျစေတယ်။သိပ်လှတယ် မမရယ်.။မပွင့်တပွင့်ရယ်သံလေး၊နားစည်ထဲကနေ ဦးနှောက်ထဲ၊ ဦးနှောက်ထဲကနေ သူ့စိတ်ဝိဥာဉ်ထဲ
၊သွေးကြောထဲအထိ ပျံ့နှံ့စီးဝင် ။
“မမက သိပ်လှနေတာကို ငေးမှာပေါ့..။ကိုယ့်ချစ်သူ ငေးတာပဲ...ဘာဖြစ်လဲ..။”
နေ့စဉ်ထုံးစံအတိုင်း အခွေဆိုင်လေးထဲမှာစကားတွေပြောကြတယ်..။မမရှက်ဝါးဝါးလေးနဲ့  ခေါင်းလေးငုံ့ ၊ပြီးတော့ ဆံနွယ်တွေ ခါယမ်း၊ လက်သီးဆုပ်လေးတွေနဲမနာအောင်ထုနှက်တယ်၊၊့ မမလက်လေးတွေ နာမှာစိုးလို့ သူဖမ်းဆုပ်ထားမိ ။
”အပိုတွေနော်...။မောင် အပြောကောင်းလေး ၊ဒါနဲ့နေပါဦး .၊ ဘယ်သွားမယ်ပြောပြီး
ထွက်လာတာလဲ...တော်ကြာ မောင့်မေမေ သိမှဖြင့် ”
မမစကားတွေ တစ်ဝက်တစ်ပျက်နဲ့ရပ်သွား၊ မမအသံတိမ်ဝင်ပျောက်ကွယ်.။မမမျက်နှာကို သူသနားစဖွယ်ကြည့်တော့ အမျိုးအမည်မသိတဲ့ အရိပ်တွေယှက်သန်းနေတယ်.။မမရယ်...မမစိတ်ပူနေတာလား..။မမကို မရ ရအောင်လက်ထပ်မှာပါ။သူ့ရင်ထဲမှာ စကားသံ ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်လို့ ။
“ လက်ဖတ်ရည်ဆိုင်ဆိုပြီး ..ထွက်လာတာပဲ မမရယ်.။ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး..။မမတောင်
နှစ်ရက်မတွေ့ရလို့လား မသိဘူး။ နည်းနည်းပိန်သွားသလိုပဲနော်..။ ”
“အချွဲလေး...ကြည့်၊ချွဲပြန်ပြီ..။မမက နဂိုအတိုင်းပါပဲနော်..။ မောင်သာ ဘောလုံးပွဲတွေ
ကြည့်လို့ထင်တယ်...။အိပ်ပျက်များလို့လား မသိဘူး.။မျက်ကွင်းနည်းနည်း ချောင်လို့..။”
မမရဲ့ဂရုတစိုက်အပြောမှာ သူပျော်ဝင်နစ်မူးသွားပြန်တယ်.။မမအသံက ချိုချိုနွဲ့နွဲ့.၊တစ်ခါနားထောင်ပြီး ဆယ်ရယ်လောက်သူ့နားမှာအဖန်ဖန်ပြန်ကြားယောက်လောက်အောင်နားထောင်ကောင်းတဲ့မမရဲ့စကားတွေ
ပေါ့။ မမလက်လေးကို ဖစ်ညှစ်ကိုင်ဆုပ် ၊မမကသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ခေါင်းလေးတိုးဝင်၊နှစ်ဦးသားတင်းတင်းကျပ်
ကျပ်ဖက်ထားမိတယ်.။အချစ်ပန်းတွေ အဆုပ်လိုက်အခိုင်လိုက်ပွင့်၊ရင်ခုန်ခြင်းသစ်သီးတွေ ၀င်းမှည့်လာ၊
ဖက်ထားရင်း ...မမကိုယ်လေး တသိမ့်သိမ့်တုန်လာ ၊ ရှိုက်သံသဲ့သဲ့ .။ဟင်...ဘာဖြစ်တာလဲ.၊ ဘာဖြစ်တာလဲ.။မမ ဘာဖြစ်တာလဲကွယ်.။မမမျက်နှာလေးကို တယုတယမော့ကိုင်မိ.။
“ ဟာ......မမ ငိုနေတယ်..။မမ ငိုနေတယ်လား..။ဘာဖြစ်လို့လဲ ဟင်...မမ။ ”
သူ့အလန့်တကြားမေးမိတယ်..။မမငိုနေတယ်လား..။မမမျက်ရည်ကို မြင်ရတာ သူ့ရင်ခွင်ကမ္ဘာပြိုသလိုပါပဲ.။သူ့ရင်ခုန်သံတွေ နွမ်းခြောက်လို့ကြည်နူးမှုတွေ လွင့်ပျောက်ကုန်ပြီ.။မမက တစ်ချက်သဲ့သဲ့ရှိုက်ပြီး သူ့ကိုပြုံးပြတယ်..။ပြုံးပါ မမရယ်..။ပြုံးပါ..ထာဝရပြုံးနေပါနော်..။
“ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး..၊မောင်ရယ်.။ မောင် မမကို အရမ်းချစ်တာကို သိတော့
၀မ်းသာမိတာရယ်.၊ခွဲရမှာကို တွေးမိတော့ ၀မ်းနည်းမိတာရယ်ကြောင့်ပါ..။
မမလည်းလေ မောင့်ကို သိပ်ချစ်တယ်.။မောင်နဲ့မခွဲနိုင်ပါဘူးလို့ ပြောချင်ပေမယ့်
ခွဲကြရမှာပဲနော်..။မမကိုက ကံမကောင်းခဲ့တာပါ.။မမရဲ့အတိတ်ကမှ မလှပခဲ့တာပဲလေ..။ ”
မမမျက်နှာဖျော့ဖျော့လေး..။မမအသံတိမ်ဝင်ပျောက်ကွယ် ၊မျက်တောင်တွေကို တဖျတ်ဖျတ် လှုတ်ခတ်လို့..။မမကိုကြည့်ရင်းသူသနားလာတယ်.။မမရယ်..ခွဲရမယ်တဲ့လား.။သူ့မျက်နှာလည်း အုံ့မှိုင်းရီပြာသွား ၊နှလုံးသားဗဟိုချက် စူးခနဲ၊စစ်ခနဲ..။ကျလုဆဲဆဲမျက်ရည်တွေကို သူအံကြိတ်သိမ်းဆည်း
“မခွဲရပါဘူး ။ဘယ်တော့မှ မောင်တို့မခွဲရဘူး ၊ မမရယ်နော် ။မမ
ယုံထားစမ်းပါ ။မမလည်းမောင့်ကိုချစ်တယ် ။ မောင်လည်း မမကိုချစ်တယ်
။မေမေ သဘောမတူလည်း မမကိုမရ ရအောင်လက်ထပ်မယ်လေ...။နော်မမ..။ ”
တိမ်ဖြူတွေကြားထဲက ထွက်လာတဲ့လလေးတစ်စင်းလို မမမျက်နှာဝင်းပကြည်လင်လာတယ်.။ခပ်ယဲ့ယဲ့ပြုံးပြန်တယ်..။ပြီးတော့ ..နေရောင်အောက်က ပန်းလေးတစ်ပွင့်လိုပြန်ညှိုးကျသွားတယ် ။သူ့ရဲ့ခေါင်းလေးကို လေတိုက်လို့သစ်ရွက်လေးလှုပ်သလို ခပ်နွဲ့နွဲ့လေးယမ်းခါတယ်။
“ မဖြစ်နိူင်ပါဘူး...မောင်ရယ်..။မဖြစ်နိူင်ပါဘူး. မမကြောင့် မောင်ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲရမယ့်
အဖြစ်မျိုးတွေ မရောက်ချင်စမ်းပါ နော်.။အချစ်ဆိုတာလေ ..အပိုင်သိမ်းမထားရလည်း
အချစ်ပါပဲ..။မမ ကျေနပ်ပါတယ်..။မမ ကျေနပ်ရပါပြီ..။မောင်ချစ်တာကို သိတာနဲ့ပဲ
မမစကားတွေက သူ့နားထဲမှာ ပဲ့တင်လျှံဝေ ၊ မမလက်ဖ၀ါးလေးကို တယုတယဆုပ်ကိုင် ၊ မမနဖူးလေးကို ခပ်ဖွဖွလေး သူနမ်းတယ်။မမ ဆံနွယ်နက်ပျော့အိအိတွေဆီမှ အမျိုးအမည်မသိတဲ့
သူခပ်တိုးတိုးလေးပြောပြီးမမကိုဖက်ထားရာကလွှတ်၊အခွေဆိုင်လေးကပြန်ထွက်ဖို့ ခြေလှမ်းပြင်တယ်။ သူအိမ်ပြန်ရတော့မယ်လေ။မမနဲ့စက္ကန့်တိုင်းတွေ့ချင်တယ်လို့စိတ်ထဲကအထပ်ထပ်ရေရွတ်၊သူ့နှလုံးသားလူးလွန့်လှပ်ခုန်လာ၊သိပ်ချစ်လိုက်တာ၊မမရာ။သိပ်ချစ်လိုက်တာ .။ခွဲခွာခြင်းအထိမ်းအမှတ် ၊အနမ်းတစ်ပွင့်တော့ ထပ်ဆင့်ချွေမိ..။
အခွေဆိုင်ထဲကနေ ပြန်အထွက်မှာ မေမေ့သူငယ်ချင်းအန်တီမြင့်ရီနဲ့ဆုံတယ်.။အန်တီမြင့်ရီအကြည့်က ရဲမေတစ်ယောက်လိုစူးစမ်းဟန်။ဆိုင်ထဲကမမကိုတလှည့်၊ဆိုင်အပြင်ပြန်ထွက်လာတဲ့သူ့ကိုတလှည့်မျက်မှောင်ကျုံ့ပြီးကြည့်တယ်..။ဟာ.မာန်နတ်ရဲ့သမီးတော်ကြီးနတ်ဆိုးမကြီးပါပဲ။
သူအဲလိုခပ်တိုးတိုးရေရွတ်မိတယ်။အန်တီမြင့်ရီကို နှုတ်မဆက်တော့ဘဲ ဘေးကနေခပ်သွက်သွက်လျှောက်လာ၊သက်ပြင်းငွေ့ငွေ့က သူ့နောက်မှာကျန်ခဲ့တယ်.။
“သြော်..လူတွေ၊လူတွေ တော်တော်ခက်ပါလား ၊အချစ်ကို အချစ်လို့မမြင်ကြဘူး..။အရောင်
တွေလိုက်ဆိုးကြတယ်ကွာ ၊ တောက်..”
သူမကျေမနပ်ဖြစ်မိ..။ဒါပေမယ့်...ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်၊မြေပြင်ကို ငုံ့ကြည့်၊ဘယ်နေရာ ကြည့်ကြည့် မမမျက်နှာချည်းသာ။
သူ့ခြေထောက်တွေက ခဲဆွဲထားသလိုမလှမ်းချင်လှမ်းချင်၊သူ့ခြေလှမ်းတွေက ယိုင်နဲ့လျော့ခွေ..။မမဆီက အပြန်လမ်းတိုင်း အဲဒီလိုဖြစ်နေကျပါပဲလေ..။
မိုးတွေက တဝေါဝေါနဲ့သည်းသည်မည်းမည်း၊၊မိုးခြိမ်းသံကလက်နက်သံတစ်ခုလိုကြောက်မက် ဖွယ်မြည်ဟည်းလို့ ။လျှပ်ပန်းလှပ်နွယ်တွေကတစ်ချက်တစ်ချက်ဝင်းလက်.၊ပြိုးခနဲ၊ပြက်ခနဲ ။ ကာင်းကင်ကလည်းအုံ့မှိုင်းဝေရီလို့ပေါ့...။သူ့အိမ်လေးထဲမှာလည်းအပြင်က မိုးသံတွေနဲ့အပြိုင်
သူ့မေမေနဲ့သူနဲ့စကားသံတွေ ပစ်ခတ်ပေါက်ကွဲ.။စကားလုံးတွေ ၀ိုင်းဒိုင်းကြဲလို့..။
“မေမေရယ်...မေမေ.မမကိုအဲဒီ့လောက်ထိပြောစရာမလိုပါဘူး..။ပြီးတော့ သူ့မှာဘာအပြစ်မှရှိတာလည်း မဟုတ်ဘူး မေမေတို့က မိမရှိဖမရှိ ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းမရှိတဲ့တစ်ကောင်ကြွက်ဆိုပြီး အထင်သေးချင်တာလား ၊အဲတာတော့မကောင်းဘူးဗျာ..။မမ..က မိန်းမသားတန်မဲ့ အခွေဆိုင်လေးဖွင့် သူ့စီးပွားသူရှာ..၊ အဆောင်မှာ ငှားနေရင်းနေရ ရှာတာ.။မေမေ မိန်းမသားချင်း ကိုယ်ချင်းစာကြည့်လေဗျာ.။ ”
မျက်နှာလည်း ဒေါသထွက်လို့နီမြန်းလာရင်း အသားတွေလည်း တဆတ်ဆတ်တုန်နေတယ်..။
“ ဘာ ...အပြစ်မရှိဘူး ..ဟုတ်လား။ တစ်ခုလပ်မလေ..။အဲဒါအကြီးမားဆုံး
အပြစ်ပေါ့..။သားကိုရော တကယ်မေတ္တာရှိတယ် ထင်နေတာလား...။”
အဲဒီလိုအခြေအနေတွေ ကြုံခဲ့ရပေမယ့် မေမေပြောသလိုမဟုတ်ဘူး..မေမေ။ ”
သူအပြင်းအထန် မမကိုကာကွယ်ပြောဆို ၊ သူ့မေမေစကားလုံးတွေက သူ့နားထဲက လျှံဝေထွက်ကုန်တယ်..။
”သား ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ မွှန်နေတာပါ..သားရယ်..။မေမေပြောတာတွေ သေချာစဉ်းစားပါဦး။သားဘက်က မပြတ်သားရင်တော့ မေမေကတော့ တစ်ခုခု လုပ်ဖို့လိုလာပြီ..။ မေမေ တစ်ခုခု လုပ်ကို လုပ်ရမယ်..။ ”
သူဒီနေ့ သူ့မေမေလစ်တာနဲ့ အပြင်ကိုလစ်ခနဲထွက်လာတယ်..။မေမေက ဘယ်မှမသွားရ အမိန့်ချထားတယ်.။မေမေ့အမိန့်ကိုဆန့်ကျင်ရန်မစွမ်းသာ ၊ သူအတိုက်အခံလုပ်ရင် မေမေက ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို မူးလဲပြ၊သွေးတိုးပြမယ်လေ.။
အခုတော့...သူ မမအခွေဆိုင်လေးဆီသို့ ခိုးထွက်လာခဲ့..။လမ်းတစ်လျှောက်လုံးပန်းတွေကြဲထားသလိုမျိုး..။မမဆီလာခွင့်ရ တိုင်းသူကြည်နူးရွှင်ပျော်၊ရင်ခုန်သံတွေ လန်းဆန်းတက်ကြွ
လာမြဲပဲလေ ။နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်က မမမျက်နှာလေးတွေး..၊ခပ်ရေးရေးပုံဖော်ကြည့် ၊တဖြည်းဖြည်းနဲံ့
သူ့ရင်ဘတ်ထဲမှာပန်းတွေ အဆုပ်လိုက်အခိုင်လိုက်ပွင့်လာကြ..။သူ့ရင်ခွင်လာ မွှေးပျံ့လို့..။ခြေလှမ်းတွေက
သူ့ပါးစပ်မှ လွှတ်ခနဲရုတ်တရက်ထွက်သွား..၊ပိတ်ထားသောအခွေဆိုင်လေးကို ကြောင်တက်ငေးမော၊သူ့ကိုယ်ထဲကသွေးတွေ လန့်ပြီးခုန်ကုန်တယ်.။ဟာ....ဆိုင်ပိတ်ထားပါလား..။မမများနေမကောင်းလို့လား။မမ ဘာဖြစ်လို့လဲ.။မမ ဖျားများနေသလား။မေးခွန်းတွေ ၊ မေးခွန်းတွေ အတွေးထဲမှာ ခုန်ပျံလာကြ ၊
ခြေလှမ်းတွေ ထပ်မံဦးတည်၊မမ ငှားနေတဲ့အဆောင်ဆီသို့..။
အဆောင်ပိုင်ရှင်အန်တီကြီးရဲ့စကားတွေအောက်မှ သူ့ဦးခေါင်းချာချာလည်သွား ၊နှလုံးသွေးတွေ ပြောင်းပြန်စီး ၊ရင်ခုန်သံတွေပျောက်ရှ ၊မျှော်လင့်ချက်တို့ ကြေမွကျိုးပျက် ၊သူ့ရင်ခွင်ဟာ
” အန်တီ့ကိုလည်း ပြောမသွားဘူး..။မနေ့က ရုတ်တရက်ကြီးပြောင်းသွားတာ.။နယ်မှာ အလုပ်သွားလုပ်မယ်ဆိုလား အခွေတွေလည်းရတဲ့ဈေးနဲ့အကုန်ရောင်းသွားတာပဲ။ဘာမှလည်း ရေရေရာရာ မပြောဘူး။ငိုတော့ ငိုထားတယ်နဲ့တူ တယ်..။မျက်လုံးတွေနီလို့ မျက်ခွံ့လည်း မို့လို့..”
သူ့အတွေးမှာ လင်းခနဲ ၊လက်ခနဲ..။ပြီးတော့ ထိတ်ခနဲ ၊ ပြာခနဲ..။မေမေ ..မမဆီလာပြီး ဘာတွေပြောသွားသလဲ။မမကိုနာကျင်အောင်များ ပြောဆိုသွားလို့လား။မမ သူ့ကိုနာကြည်းမုန်းတီးပြီး
သူ့ရှေ့မှ ထွက်ခွာသွားတာလား။မသိခြင်း ဝေခွဲမရခြင်းတွေကိုသူအဖြေရှာနေမိတယ်..။
မေမေရယ်၊သိပ်ရက်စက်တယ်..။မမကို“ ငါ့သားနဲ့ ဝေးဝေးရှောင်နေ ”လို့ များသွားပြောခဲ့တယ်တဲ့လား ၊၊
သူ့အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ အမှောင်ချပြီးထိုင်နေ.။အတွေးတွေက ဟိုတစ်စဒီတစ်စ ကြဲပျံ့ ၊ နှလုံးသားကို ပိုးမွှားများစွာကိုက်ခဲစားသောက်နေသလို တရွရွနာကျင် ၊ မျှော်လင့်ချက်အနာဂတ်တို့ကပဲ့ကြွေ
ကျိုးပျက် ၊ သူ့ရင်ခွင်ဟာလည်းဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ပေါ့.။
အမှောင်တွေ..၊ အမှောင်တွေ ၊အမှောင်တွေထဲမှာ တစ်စုံတစ်ရာဟာ ရင်ထဲပြည့်သိပ်လာခဲ့ပြီး သူမွန်းကြပ်လာခဲ့။ခါးသီးကြမ်းရင့်တဲ့ အလွမ်းတွေက ပူပြင်းရှတလို့..။မကျေနပ်မှုတွေကို အံကြိတ်မျိုချ ၊
မရည်ရွယ်ဘဲ မျက်ရည်တွေ ဖြုတ်ခနဲ ဖြုတ်ခနဲ ကြွေကျလာခဲ့တယ် ။
Posted by မောင်ရေချမ်း at 6:55 AM
Mary Grace August 3, 2012 at 4:52 AM